I-Crystal Meth Facts - Ulwazi lwe-Methamphetamine
Yintoni i-Crystal Meth?
Imichiza n-methyl-1-phenyl-propan-2-amine ibizwa ngokuthi methamphetamine, i-methylamphetamine, okanye i-deoxyephedrin. Igama elincinci lithetha nje 'li-meth'. Xa kuhlobo lwalo lwe-crystalline, le nkunkuma ibizwa ngokuba yi-crystal meth, ice, iTina, okanye iglasi. Jonga itafile engezantsi kwamanye amagama esitalato eso sichaza. I-Methamphetamine ivuselela kakhulu umlutha.
I-Crystal Meth isetyenziswa njani?
Ngokuqhelekileyo, i-crystal meth iyabhema kwimibhobho yeglasi, efana neyokusetyenziswa kwe-cocaine .
Inokuthi ijojowe (mhlawumbi iyomile okanye iyancibilike emanzini), ifakwe, igxilwe, okanye ifakwe kwi-anus okanye i-urethra.
Kutheni I-Crystal Meth Isetyenziswa?
Abafazi bavame ukuthatha i-crystal meth kuba kunokubangela ukuba ilahleko ilahleke ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, iziphumo zithuba elifutshane. Umzimba ukwakha ukunyamezela kwilisi ukwenzela ukuba ukulahleka kwesisindo kuphephe kwaye kuyeke emva kweeveki ezintandathu emva kokuthatha iziyobisi . Kwakhona, ubunzima obulahlekileyo buya kuphinda buyeke xa umntu eyeka ukuthatha i-methamphetamine. Ngenxa yezi zizathu, ukudibaniswa nendlela umlutha ngayo izidakamizwa, i-methamphetamine ayinakunyulwa ukuba ugqitywe ngabagqirha ngokulahlekelwa kwesisindo.
Abanye abantu bathatha i-meth ngenxa yokuphakama okuhlala ixesha elide. I-Methamphetamine ibangela ukuba ininzi i-neurotransmitters ikhutshwe engqondweni, ivelise umvakalelo onokuhlala ixesha elide ngeeyure ezingama-12, kuxhomekeke kwindlela le nkunkuma ithathwe ngayo.
I-Methamphetamine ithandwa njengento evuselelayo. Njengomvuselelo, i-methamphetamine iphucula ingcamango, amandla kunye nokuqapha xa kunciphisa ukutya kunye nokukhathala.
I-Methamphetamines nayo ithathwa ngabantu abaziva becinezelekile. Basenokuthi bathathwe ngenxa yempembelelo yabo ecaleni lokunyusa i-libido kunye nolonwabo lwesondo.
Ziziphi iimpembelelo zeMethamphetamine?
Olu uluhlu lweempembelelo ezihambelana nokusetyenziswa kwe-methamphetamine ecocekileyo. Ngenxa yendlela eyenziwe ngayo, i- crystal meth ayisoze ihlambuluke, ngoko ingozi ehambelana nokuthatha izidakamizwa zesitalato iya kwandisa ngaphaya kwezi ziphumo.
Iimpembelelo eziqhelekileyo eziqhelekileyo
Ukunyuka kwamandla kunye nokuqaphela
Isifo sohudo kunye nesicefe
Ukuphelelwa kwesidlo, ukulala, ukugubha, ukugubungela umhlathi
Ukuxhalaza, ukukhubeka, ukuthetha, ukuphazamiseka, ukuxhamla ngokunyanzeliswa kwemisebenzi yokuphindaphinda, ubundlobongela, ukudideka
Ukunyuka kwengcinezelo yegazi, ukushisa komzimba, izinga lentliziyo, amanqanaba eshukela egazi, ukuxhatshazwa kwegazi
Ukunyanzeliswa kweendonga zeetriyri
Kwamabhinqa abakhulelweyo nabancinci, i-methamphetamine iwela i-placenta kwaye ifihliwe kubisi lwebele
Iimiphumo ezinxulumene nokusetyenziswa okungapheliyo
Ukunyamezela (ukufuna ngaphezulu kwesichengisisi ukuze kufumaneke impembelelo efanayo)
Ukulahleka kwexesha elifutshane
Izimpawu zokurhoxisa kuquka ukucinezeleka kunye ne-anedonia
"Umlomo weMeth" apho amazinyo ayaphela ngokukhawuleza aze aphume
I-psychosis enxulumene neziyobisi (inokuhlala iinyanga okanye iminyaka emva kokusetyenziswa kwezidakamizwa kuphelile)
Ukuxhamla kwenyama yokukhwela (ukuqulunqwa)
I-paranoia, i-hallucinations, ukunyelisa, ukuxhatshazeka kwentloko
Ukuchithwa kwemizimba (i-rhabdomyolysis) enokubangela ukuba umonakalo wezintso okanye ukungaphumeleli
Ukufa ngenxa yokubetha, ukuboshwa kwentliziyo okanye ukushisa komzimba ophezulu (hyperthermia)
Iimpahla zePhysical and Chemical ze Crystal Meth
I-Crystal meth inokuthi ibonakale kwezinye iziyobisi kwaye ihlanganiswe yimpahla yayo.
Ihlanganisi yenza iingu-enantiomers ezimbini (iimpawu ezizibonakaliso zezibuko zomnye nomnye), dextromethamphetamine kunye nevomethamphetamine.
I-Methamphetamine i-hydrochloride ityuwa yi-crystal emhlophe okanye i-crystalline powder kwindawo yokushisa egumbini enokukrakra okukrakra kunye ne-odorless, enomngcipheko phakathi kwe-170 ukuya ku-175 ° C (338 ukuya ku-347 ° F). Iyakhula ngokukhawuleza emanzini nase-ethanol.
Isiseko samahhala se-methamphetamine sisisombululo esicacileyo esiphunga njengamaqabunga e-geranium. Ichitheka kwi-ethanol okanye i-diethyl ether kunye ne-chloroform.
Nangona i-crystal meth yinto engcolileyo kwimvelo, ihlaziywa yi-bleach okanye kwiintsuku ezingama-30 kumanzi angcolileyo ebonakalayo ekukhanyeni.
Uphi I-Crystal Meth Evela Kuyo?
I-Methamphetamine ifumaneka kunye nomyalelo wokunyamezela, ukunakekelwa kobunzima bokugula, kunye ne-narcolepsy, kodwa i-crystal meth isisitrato sesitalato, esenziwe ngamabhanki angekho mthethweni ngokutshintsha ngokwemichiza izidakamizwa.
Ukwenza i-crystal meth ibandakanya ukunciphisa i-ephedrine okanye i-pseudoephedrine, ifumaneka kumakhaza kunye nakweyeza. E-US, i-lab ye-meth isebenzisa into ebizwa ngokuthi 'i-Red, White, neBluetooth Process', equka i-hydrogenation yeqela le- hydroxyl kwi-ephedrine okanye i-pseudoephedrin molecule. Ibomvu ibomvu i-phosphorus, imhlophe i-ephedrine okanye i-pseudoephedrine, kwaye i-blue iodine, isetyenziselwa ukwenza i-hydroiodic acid. Ukwenza i-crystal meth inobungozi kubantu abenzayo kwaye bungozi kumakhelwane apho kwenziwa khona. I-phosphorus emhlophe kunye ne-sodium hydroxide inokuvelisa igesi ye-phosphine enetyhefu, ngokuqhelekileyo ngenxa yokutshisa i-phosphorus ebomvu, kunye ne-phosphorus emhlophe ingenza i-auto ithoxise kwaye ifuthe i-lab ye-lab. Ukongeza kwi-phosphine kunye ne-phosphorus, iindawo ezinobungozi ezahlukahlukeneyo zinokuthi zidibaniswe ne-lab ye-meth, njenge-chloroform, ether, i-acetone, i-ammonia, i- hydrochloric acid , i-methylamine, i-iodine, i-hydroodic acid, i-lithium okanye i-sodium, i-mercury kunye ne-gesi ye-hydrogen .
I-Adderall Facts (enye i-amphetamine)
Amagama ezitalato zeCallstal Meth
I-Poor Man's Cocaine
Uluhlu Lwezonyango Ezivela Kwizityalo
I-Jellyfish Stings kunye Nomntu Wokulwa
Ukwenza I-Crystal Meth - Ukuphuka Okubi
York College GPA, SAT kunye ne-ACT Data
12 Amaxwebhu anyanzelisayo malunga neMandla yeMali